VaPeter Moragn Vanopihwa Mubairo weStockholm Water Prize
Chikumi 03, 2013
WASHINGTON — Nyanzvi yemuZimbabwe munyaya dzekugadzira pamwe nekuvandudza zvibhorani zvemhando dzakasiyana siyana pamwe nezvimbuzi munyika nepasi rose, ndiyo yakawana mubairo wegore rino we Stockholm Water Prize Laureate.
Doctor Peter Morgan, avo vanozivikanwa zvikuru muZimbabwe munyaya dzekuwanira vanhu vekumaruwa mvura yakachena pamwe nezvimbuzi zvepamusoro, vachanopihwa mubairo wezana nemakumi mashanu izviuru zvemadhora pamabiko makuru achaitirwa mu Stockholm ku Sweden musvondo rekucherechedza kuwanirwa kwevanhu mvura yakachena pasi rose, kana kuti World Water Week muna Gunyana.
VaMorgan vashanda muZimbabwe kwemakore anodarika makumi mana vachiunza humhizha mukuwanikwa kwemvura kuburikidza nekugadzira zvibhorani zvinonzi Bush Pumps, matsime akavandudzwa, Upgraded Family Wells, pamwe nezvimbuzi zve Blair Toilets. VaMorgan, avo vava nemakore makumi manomwe ekuberekwa, vanoti vanonzwa kufara kukuru nekupihwa mubairo uyu.
Vanoti mubairo uyu hausi wavo vega, asi kuti mubairo unocherechedza mabasa avo, ayo vanoti akabudirira nepamusana pevanhu vemuZimbabwe vakatambira zvirongwa zvavo, pamwe nevamwe vavanoshanda navo mukuita basa iri.
VaMorgan, avo vakaberekerwa kuEngland muna 1943, vakadzidza munyika iyi kusvika vapihwa chitupa chezvidzidzo zve PhD – Marine Biology, vave chizvarwa cheZimbabwe.
VaMorgan vakashanda kwemakore akawanda ku Blair Research Institute yemubazi rezvehutano, iyo yava kunzi National Institute of Health Reserach. VaMorgan vanoti pfungwa yekuita zvibhorani izvi yakabva mukurudziro yemumwe mukuru wavakamboshanda naye.
Vanotiwo mukuita basa ravo, vanowana rutsigiro rwakawanda kubva kuhurumende, iyo yakatambira zvirongwa zvavo kuti zvishandiswe munyika yose.
VaMorgan vanoti zvirongwa zvekuwanira vanhu mvura yakachena pachishandiswa mari shoma zviri kushandiswawo munyika dzakawanda dzemu Africa dzinosanganisira Botswana, South Africa, Mozambique, Zambia, Malawi, Ethiopia, Tanzania, Kenya nedzimwe.
Komiti inopa mubairo uyu, ye Stockholm Water Prize Committee, inoti zvakanga zvisiri nyore kuti ibude nemunhu mumwe chete akakunda vose kubva pavanhu vakawanda vakanga vadomwa sekutaura.
Mukuru weStockholm Water Prize, Va Jens Berggren, vanoti sangano ravo rakaona zvakakodzera kupa VaMorgan mubairo uyu sezvo vaine nhoroondo mumabasa avo ekuwanira vanhu mvura yakachena, pamwe nekupa veruzhinji ruzivo pachena rwekushandisa hunyanzvi uhu.
VaPeter Morgan Vanopihwa Mubayiro weStockholm Water Prize